Maxaa kala haysta Madaxweyne Muse biixii iyo Jelayaashii qarsoonaa ee ku caanbaxay dukaameysiga danta guud ee dalka? W/Q: Arahman Fidhinle UK | Berberatoday.com
Maxaa kala haysta Madaxweyne Muse biixii iyo Jelayaashii qarsoonaa ee ku caanbaxay dukaameysiga danta guud ee dalka? W/Q: Arahman Fidhinle UK
Musuqa iyo maal-urursiga illihii dhaqaalaha ee dalka lagu boobay waa Taariikh- Taariikhduna waa Tooj lagu iftiimsado mustaqbalka si looga leexdo Taariikhdaa madow ee hore dalka uga dhacday. Dastuurka qaranka JSL ayaa inoo cadeeyey in Siyaasada guud ee dhaqaalaha Somalilaan uu ku saleysan yahay Mabaadiid’a Suuqa xorta ah ee aan qof iyo qofaf toona loo xidhi karin . Hadaba waxaa dhacday in shaqiyaad gaar ah shuruucda dalka loo jebiyey oo kooto loogu xidhay illihii dhaqaalaha qaranka anfici lahaa. Dawladnimaduna waa in la illaaliyaa hantida ummadda, Diinta iyo dhaqanka,waana in la horemariyaa baahiyaha aas-aasiga ah iyo ee adeegyada bulshada.
Dhacii badheedhka ahaa ee hantidii ummadda ku dhacay iyo fadhateysigii dalka ku habsaday kumay koobneyn oo keliya lacagihii sida xariifnimada leh loo leexsaday balse waxaa laysku wada raacay in aan beydh iyo binni loo reebin dalka ee sife gacan-wadaag ah hantidii ummadda loo boobay. Buuga Xirsi X Hassan qoray wuxuu cadeeyey in laga fii’ideystay awoodii madaxweynaha, waxaana uu daaha ka fayday xantii badneyd ee suuqyada Soomalilaan laysla dhexmari jiray. iyada oo laga faai’deysanayo awoodihii dastuuriga ahaa ee qaranku lahaa ayaa la qaybsaday laguna tagri falay Hantidii guurtada iyo maguurtada aheyd ee ummaddu wada laheyd oo dhan.
7- Qarrada Siyaasadeed iyo jiritaanka qaanuunada qabyaaladeysan ee Xisbiga Kulmiye tiir-dhexaadka u ahaa ayaa hoos u sii dhacday maadaama shacabka badankiisu isku qanciyeen in hadii: “Cod doorasho laba qabaa’il oo waaweyni ku xulufoobaan ay ka dhigan tahay in aanay dadka intiisa kale kursiga si fudud u fuulin weligood” arintaa oo ay hoosta kaga lingaxan tahay qaan-sheegashada quusta laga taagan yahay ee ay ku leeyihiin “Waa markayagii ee kursiga gudoomiyaha nagu soo wareejiya” Waa arnin khatarteeda leh hadaan wax laga bedelin waqtigeeda dhaw.